Ikhaya AMAZIKO E-ASIAN FOOTBALL Ibali le-Arda Turan yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius eyaziwa kakhulu ngeSiza; 'El Turco'. Ibali lethu le-Arda Turan yobuntwana kunye ne-Untold Biography inyaniso ikulethela iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kwimizuzu yobuntwana kuze kube yimini. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye ne-OFF kunye ne-ON-Pitch eyaziwayo into eyaziwayo ngaye. Ngaphandle kwesinye isixhobo, qalisa Qala.
I-Arda Turan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Minyaka yo kuqala
Arda Turan wazalwa ngo-30 uJanuwari 1987 e-Istanbul, eTurkey kuMnu Adnan Turan (uYise) noYuksel Turan (uMama). Wakhula engenalo iprofayili kwaye akukho nolwazi malunga nokuba wayeza kuba yintoni okanye yayiza kulandela ntoni ebomini bakhe.
Ingxelo ye-Arda yezemfundo yayingekho mzekelo. Ngomntwana wakhe osemncinane wayenzima esikolweni kwaye wayevame ukufunyanwa ekupheleni kokutyelela kwisikhulula esikolweni. Yiyo le miba yoluleko eyamenza ukuba anqume ukuya esikolweni kungekhona ukubiza kwakhe. Ngeli nqanaba, ibhola le nto yaba yinto kuphela ayenokucinga ngayo.
Isinqumo sika-Arda sokuya kwibhola yamkelwa ngabazali bakhe. Bamsabela ngokukhawuleza kwisigqibo sakhe ngokukhawuleza babhalise kwi-football academy e-Istanbul.
Abazali bakhe bayazi ukuba ukuqonda umntwana wabo ngenye yezona zinto zibaluleke kakhulu ukuba bafunde njengabazali abalungileyo.
Baye banceda kwaye banempumelelo ukukhokela nokunyusa uArda njengoko wakhula. U-Arda kunye nexesha laphuhliswa umgangatho wobuntu obuthile obonisa ibhola kwaye waqhubeka ephila ubomi bakhe kude kube ngumhla.
Njengoko italente yakhe yaveliswa, abazali bakhe babaxhasa ngakumbi. Indlela efanelekileyo yokumenza avuyiswe kukumthabatha ukuthenga. Baya kuthenga into ayifunayo. Bamkhusela kuyo nayiphi na into eyayinokuphazamisa amaphupha akhe. Ngokufanelekileyo, bambukela belele, badle baze badlale umdlalo omhle.
I-Arda Turan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ubomi Bentsapho
Utata: UMnumzana Adnan Turan ungumntu onokuthula okhululekileyo kwishishini lakhe lokuthengisa kwendawo yase-Bayrampaşa ye-Istanbul.
Uhlala ekhunjulwa ngenxa yendima enxhasayo eyanikela unyana wakhe endleleni yakhe yomsebenzi. Ngokungafani nomfazi wakhe uYuksel, akayikuxubusha kakhulu kwimisebenzi yonyana wakhe.
Umama: UYuksel unina kaArda. Uyazimela kakhulu owaziwayo ngokukhusela unyana wakhe phakathi kweengxabano.
Wayekhawuleza ukukhusela unyana wakhe ngexesha lesiganeko sendiza yesizwe apho u-Arda wakhe unyana wahlasela omnye umculi weTurk uBilal Meşe.
Ngokutsho kweYüksel Turansaid, "Umkhankaso we-lynching wam unyana uqale".
Unina kaArda Turan, uYüksel Turan, wathi, "U-Arda ngumntu ontle kakhulu kwaye ngokuqhelekileyo umntu ongafuni ukuphula umntu, uphumelele impumelelo yokuba akukho mdlali webhola lebhola eliza kufikelela kweli lizwe, uhlawula intlawulo ngoku ... Bazama ukugqiba unyana wam kunye neqela elihlangeneyo lynch ! Ndibhalile kangangokuba ngunyana wam ukuba kunzima ukungaziphenduli. " Ukunikezela ngokukhawuleza ukunikezela ngamagama.
Ubhuti: U-Okan Turan umzalwana omdala.
U-Okan wamkela i-Undergraduate Degree (BSc) esuka kwi-Istanbul Technical University, i-Aeronautical and Astronautical Faculty kwi-1989 kunye ne-Master degree (MSc) e-Istanbul Technical University, i-Faculty of Management, i-Engineering Engineering kwi-1992. U-Okan waqala umsebenzi wakhe wobugcisa kwintengiso yeemalikezi njengeMalibizi-mali kwi-Data Securities Co. kwi-1992 kwaye wakhonza njengoMlawuli oyiNtloko wezeMali kuze kube ngumhla.
I-Arda Turan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
Miranda Shelia kwaye Arda Turan bebenokuthandana ukususela ngo-Dec 2016. Isibonelo saseGeorgia siye saba ngumhlobo osandul 'ukutshatyalaliswa.
U-Aslian Dogan (ubonwe ngezantsi) wayengumhlobo we-Arda Turan. Uzalelwa ngomhla we-4th ngoDisemba, i-1985 kwaye uthetha bobabini isiNgesi nesiTurkey. U-Aslian no-Arda baqala ngo-2014 kwaye baphela ngo-Disemba 2016. Zombini iipaki zazisondelene kakhulu.
I-Asides yase-Aslian, i-Arda Turan ine-5 nabanye ubudlelwane phakathi neminyaka. Ubomi bomtshato weArda Turan kwisishwankathelo kubandakanya amagama e-6. (1) I-Dilara i-Oztunç (iphuma kwi-2007-2008), (2) i-Sinem Kobal (Idatha esuka ku-2012-2013) (3) Selin Imer (echazwe kwi-2012) (4) Idil Firat (echazwe kwi-2013) (5) i-Aslihan Dogan (Kule 2014) (6) UMiranda Shelia (2017).
I-Arda Turan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ucinga ukuba unguNkwenkwezi yePapa
Ngethuba lekhefu laseLa Liga, iTuran yanquma ukuzama ukuyenza ibe yinkwenkwezi ye-pop. Waya ekhaya eTurkey ukuba acule 'kwiLizwi'. Wenza ingoma ebizwa ngokuthi 'uSari Cizmeli Mehmet Aga' - ingoma yesiTurkey yeglasi kwaye, ngokuqinisekileyo, masithi nje kufuneka anamathele ebhola. Abagwebi basoloko bajika izihlalo zabo ngokuzenzekelayo ukuze babone ukuba ngubani othethekileyo.
I-Arda Turan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Udosa uMichael Jordan noRoger Federer
Umgcini we-ndeard ubonwa njengempawu ngabaninzi eTurkey. Kodwa uArda Turan ineempawu zezinye imidlalo. Umdlalo weTennis uRoger Federer kunye ne icon yeBhola yeMidlalo uMichael Jordan ngabadlali abajongene naye.
Udliwano-ndlebe, wathi, "Ndihlala ndizama ukuphucula, abadlali bezemidlalo nabasetyhini bahlala bezama ukuphucula. Yingakho uMichael Jordan kunye neFederer ziimpawu zam. "
Zomabini ezi ngcamango aziwa nje ngezakhono zabo kunye nobuchule kwintsimi kodwa nobabalo babo kunye nobuntu babo. Abadlali beTuran baye bahlala bemchazela njengomntu onentliziyo enomdla nomhle ovakalelwa ngayo ngezinto azikholelwayo.
I-Arda Turan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Uthando Lwezithuthi
Ngokutsho kweTurkey Press, iTuran ngaphambili yayine-Aston Martin DB9 kunye ne-Mercedes-Benz SLS AMG.
Unomdla wemoto kwaye ngoku uqhuba Audi RS6. NgoJanuwari 2009, wayebandakanyeka ekuqhubeni imoto Istanbul. Ngethamsanqa, iTuran yabangela ukulimala kanzima kwaye yaqhubeka nokuqeqeshwa ngokucutshulwa kunye nemivimbo.
I-Arda Turan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Imiba Yokulimala
Ngo-16 ngoNovemba 2008, iTuran yawa ngexesha lomdlalo ngokumelene ne-İstanbul BB.
Emva kokukhawuleza esibhedlele, wafumanisa ukuba une-cardiac arrhythmia. Ngomhla emva kwesiganeko, oogqirha bathi uTuran wayenempilo kwaye ukugqithiswa ngokugqithiseleyo kwabangela i-arrhythmia. Ngomhla kaNovemba 2009, wafumana ubunzima beengulube kodwa wayifumana kwiintsuku ezimbalwa ukuze aqhubeke nokuqeqeshwa.
Kwa kutshanje, iTurk iye yaqhelana nokulimala. Le mihla, i-knee okanye i-hamstring. Enyanisweni, ezenzakalise emdlalweni kunye nabaqeshi bakhe ngoku, washiya intsimi ngezinyembezi emehlweni akhe.
Naphezu kokulimala kwakhe emzimbeni, uyaziwa ngokuba ngumloli. Ngokuqhelekileyo kuqwalaselwa kwi-ilk yabadlali abangazange bathethe isimo sengqondo sokufa. Umlinganiselo ongekho lula ukuza kodwa uyabaluleka kubadlali bebhola.
I-Arda Turan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts-Ukuhlaselwa okuxakekayo kunye noLeonidas
I-Uncanny Resemblance Phakathi kwe-Actor Popular, uGerard Butler AKA Leonidas we-300 kunye no-Arda Turan uye wabeka i-intanethi kwisiphepho. Oko bonke abantu baqhekeza kwakukho ukufikelela komfanekiso ka-Arda wokuwa kweentsimi ezidibeneyo kunye neLeonidas.
I-Arda Turan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Iphupha lokudlala kwiLiverpool
Abadlali baziwa ngokubanzi ukuvakalisa uthando lwabo kwiqela elithile. Abanye banelungelo lokudlala amacala abo abathandayo xa abanye bengenalo.
UArda Turan ungowesigaba esilandelayo. Emuva kwi-Euro 2008, u-Andrey Arshavin wachaza uthando lwakhe nge FC Barcelona. Ngelishwa, ukuhamba akuzange kwenzeke. Ku-2011, eTuran, ngokudlala uGalatasaray naye wabonisa uthando lwakhe ngamaqhawe aseNgesi eLiverpool. Wathi: "Njengoko ndihlala ndithetha, u-Liverpool undikhangela ngenxa yesithethe sabo.
"EYurophu, ndingumncedisi weLiverpool, ngoko ukuba ndiya kudlala eYurophu, ndingathanda ukuzidlala."
Watsho ukuba kwakuliphupha lakhe lokudlala kwiReds ye Merseyside. Nangona kunjalo, uLiverpool akazange eze. I-Atletico Madrid yenza kwaye ilandela ukuxhaphaza kwayo noGeorge Simeone elalibayisa kwiLi Liga kunye neyokugqibela yeLigan League ngoku uye waya eCamp Nou. Okubonakala ngathi ukulahleka kweLiverpool ngokuqinisekileyo kwakunzuzo yeBarcelona.
I-Arda Turan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Emva kokuphosa ibhoti kumpempe
Ngaphandle kokuba ngumzekelo omhle ngemidlalo yakhe yokulahla, u-Turan uye wakhulelwa ngendlela ekhulu kunamhlanje, ukuphonsa ibhola lakhe kwi-Atletico yaseCopa del Rey etshitshise eBarcelona kunyaka odlulileyo.
Sekunjalo, akayi kuba ngumdlali ophezulu wokugqibela ukulahlekelwa intloko.
I-Arda Turan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Indoda enentliziyo yegolide
U-Arda uyaziwa ngokuba nenhliziyo yegolide. Utshatye inxaxheba kumdlalo wokuthandana eYiputa ukuphakamisa imali kwiinkedama zeenkedama kwilizwe laseArabhu. Kunyaka ophelileyo, wadlala umdlalo wothando kwixesha lakhe langaphambili (Izmir Ataturk Stadium) ukunyusa imali kwiintsapho zamaxhoba aseMay.
Uyaziwa kakhulu ngokunceda abantwana abagulayo. NgoMeyi, i-2014, wamiselwa uMmeli weNkulumko yokuBulala kwi-Khojalay Massacre ephathelele ekubulaweni kwabantu base-Azerbaijani be-161. Imisebenzi yakhe ibandakanya ukukhulisa ulwazi nokukhuthaza uxolo lwehlabathi.
Ungumntu osapho. Ngomvuzo wakhe wokuqala, wathenga abazali bakhe indlu kwaye usanda kuthengela imoto umntakwabo, kungekhona nje imoto, iPorsche.
I-Arda Turan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -I-Socialist
UArda Turan wabuya wavula indlu yakhe eMadrid kubantu abakuwo wonke ummandla wezopolitiko. Indawo isetyenziselwa injongo yeengxoxo kunye neengxoxo. I-Turan ngokwakhe yintlalo-ntlalontle kwaye iyaziwa ukuphatha bonke abantu kwindlu ngendlela efanayo nangakhathaliseki ubuncwane nobugcisa.
Wakhula kwindawo yokusebenza e-Istanbul kwaye wayesebenzisa iminyaka yakhe yokuqala esitratweni. Izihlandlo ezinzima ebuntwaneni bakhe kunye neengxaki ezijongene naloo msebenzi zinefuthe ebomini bakhe. Kwintetho ebeyathethileyo, "Ndihlala ndixhasa amalungelo abasebenzi, amalungelo abantu abaqhelekileyo."
Isikhundla sezopolitiko esiqinisekileyo sasizuzwa yiTuran kwizizukulwana. Uyise wayesekhohlile iingcamango ezinqabileyo, utata wakhe wayengumsekeli wezopolitiko.
I-Arda Turan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Umdlalo webhola
UTuran waqala ukudlala ibhola eBharampaşa. Xa wayengu 12 kuphela, wajoyina iGalatasaray e-2000 apho wayemi khona. Wenza iqela lakhe lobuchule kunye neGalatasaray kwi-2006 emva kweentsuku ezihlanu ezidlala kwiqela lebhola yolutsha. Akuzange kube njalo le nto. Umncinci omncinane unzima ukujamelana neengxaki zebhola yemihla ngemihla, kungekhona ubuncinane isantya kunye namandla adingekayo kumdlalo. U-Arda wayengumdlali omfutshane kwiqela le-age lokuzalwa lokuzalwa kwe-1987, kwaye yabonisa kwimisebenzi yakhe yokuqala. Abadlali abakhulu, abanamava amaninzi kulo mdlalo babengazibandakanyi kumdlali owayenamaqhinga onke kodwa engaphumeleli.
Wenza iqela lakhe kwikomiti yesizwe yaseTurkey ngo-Agasti 2006. I-Turan idlala iTurkey okokuqala ngqa ngokumelene neLuxembourg kumdlalo onobungane kangangokuba iTurkey iphumelele i-1-0.
Ngexesha le-2006 / 07, iTuran yaba ngumnye wabadlali abaluleke kakhulu kuGalatasaray. Uthi igama lakhe lokuqala le-Super League kwi-2008. Iqela leSpeyin i-Atletico Madrid yamxela i-12 yezigidi ze-euro ngo-Agasti 2011. Kwixesha lakhe lokuqala e-Atletico Madrid, iTuran yanqoba i-Europa League kunye ne-UEFA Super Cup. Inombolo ye-Atletico i-10 yadlala indima ebalulekileyo ekuphumeleleni kwinqanaba leqela lakhe kwi2013 / 14. Ngelo xesha, i-Atletico Madrid ifanelekile kwi-Final League yokugqibela kwixesha le-40 iminyaka. Inkwenkwezi yaseTurkey iTuran yazuza iinjongo ze-22 kwaye yayinceda i-32 kwimidlalo ye-177 kwiminyaka emine yokupela e-Atletico Madrid. Ngomrhumo wokutshintshwa kwe-34 yezigidi ze-euro, ukusayina okusha kweBarcelona kuba ngumdlali oxabisekileyo kwiTurkey kwimbali.
I-Arda Turan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ukukhetha uMlobi
U-Arda Turan umhlala-phantsi kwiqela leSizwe laseTurkey laza emva kokubikwa kwelokuloba intatheli kwiqela leendiza.
Utyholwa ukuba ube neengxoxo zomlomo kunye nomzimba kunye nomlobi wezithuthi ngokulandela umhlobo waseMakedoni ngenxa yokumxelela ukuba kwenziwe okwakuthiwa yiTuran ngokudala ukungadibanisi phakathi kweqela le-bhonasi.
Ngoku ka Reuters, ITuran yavuma ukuba "yenza iphutha" kwaye ishiye iqela lakhe lesizwe.
"Ndenze iphutha ngelixa ndembethe iifom yeqela lelizwe. Kwakuyinto engafanele iyenze kwiqela lelizwe leqela, " uthe.
Ngokwephephandaba leNgesi Ezizimeleyo, esi siganeko senzeke kwinqwelomoya kwiqela lase-Italiya xa uTuran wathi waya kuBilal Meşe kupapasho lwaseTurkey Milliyet. Nantsi into eyenziwa yi-I-Independent ingxelo yokuba yatshintshiselwano:
Uxelele uBilal Meşe, ngaba ukhona? "Waqala. "Ngaba unathi xa ubhala malunga neebhonasi? Ngubani na ukuba ndicele imali? Ngubani owambuzayo ngeebhonasi? Thetha. Ima kancinci. Ngubani owenze ukuba ubhale ezo ngxelo? "Kuthiwa uTuran wamemeza e-Meşe, intatheli yezilwanyana ezazisithi u-Turan uninzi lwe-disadmony yeqela.
Kwaye kuthiwa intonga kaTuran yayiqhubekile ngaphambi kokuba ingxelo ibone ukuba kufuneka ikhutshwe ngabadlali beklasi njengoko ibamba uMeşe ngomqala. UArda Turan wathi akayi kuzisola nokuba akayi kudlala iTurkey. Kufanelwe ukufakazela ukuba bobabini babesakuba ngabahlobo abahle njengoko kuboniswe kumfanekiso apha ngezantsi.
I-Arda Turan Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -LifeBogger Izabelo zeBography
Uyaziwa ngokuba ngumlawuli webhola, izakhono zokuqhawula kunye nombono. Sinika izikhundla zakhe ezingezantsi.
URonald Koeman Ibali lobuntwana kunye neNqaku le-Biology leNobold
I-Saul Niguez Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts
Umhla oLungisiweyo: nge-15 kaSeptemba ngo-2020